10 Ficil Ood Ku Garan Karto In Uu Ku Jecel Yahay.
March 8, 2019 qawdhan
Mar Allaale markaad telefankaaga demiso ama dabku ka dhaco ayuu kusoo garaacaa. Markaad telefanka shididna waxaad ugu tagtaa farriimo uu kuu soo diray intii telefanku uu kaa dansanaa ama aad ka maqnayd.
Wuxuu ku dedaalaa in uu la socdo talaabo kasta ood qaadid. Wuxuu isku dayaa in uu 100% kaa war hayo. Ku geeyo meeshaad rabtid ama kaa soo qaado hadii uu karo. Hadaanu karina wuu is kelifaa.
Wuxuu kula wadaagaa waxyaabaha uu ku madadaasho ama u arko inaad jeceshahay sida heeso, video-yo qosol ah, qoraalo iwm. Haduu heesi karo wuu kuu heesaa, haduu hees samayn karo wuu kuu sameeyaa.
Halka raga damaca guud lihi sawiro inaad u dirto kaa codsadaan ninka ku jeceli ma jecla in aad wax sawir ah dhigtid social media-ha sida Facebook, Instagram iyo Snapchat.
Hadal aad u sheegtid oo uu illaabaa ma jiro. Waxaanu dib kuu xasuusiyaa wakhtigaad isku cusbaydeen marmarka qaar. Wuxuu kaydiyaa xusuusta dhexdiina sida wakhtiyada, sawirada. Waxa kale oo uu kuu keenaa hadyado kedis ah oonad filaynin (haduu ilbax yahay).
Masoo hadal qaado gabdho kale sheekadiisana kuma daro markaad wada joogtaan ama wada hadlaysaan.
Hoos uma dhaco xiisaha uu u hayo la kulankaaga. Badanaa qorshe cusub iyo kulan horleh ayuu kuula yimaadaa.
Ma jecla in cid kale idin weheliso markaad wada joogtaan. Kulamadiinana cid kuma casuumo.
Wakhti kasta ood farriin dirtid ama telefan ka wacdid wuu kuu jawaabaa. Xataa haduu mashquul yahay wuu kuu jawaabaa isagoo kuu sheegayaa in uu mardhaw kugu soo celin doono.
Wuu hinaase ama masayr badan yahay. Wuu ka gubtaa hadaad soo hadal qaado nin kale ama uu arko adoo nin kale la hadlaya ama meel aad wax isugu qoraysaan. Waxyaabaha kale oo dhan eed samayso uma dhibaan siday arrintani u dhibto.
Previous Post 10 Ficil Ood Ku Garan Karto Inay Ku Jeceshahay
Next Post Yaa Wax Kuu Sheega? Maxaase Laguu Sheegaa?